Iyo yekuunganidzwa yemimhanzi inokurudzira munyori H. Murakami inozivikanwa | Zvazvino Zvinyorwa
Vangani vedu vakafarira zvinyorwa zvemunyori wechiJapan Haruki Murakami? Chero bhuku rekutanga raunoverenga nezvake (uye ini ndoti iro bhuku rekutanga, ndoda kugutsikana kuti harisi rekupedzisira kana iwe watoverengera chimwe chinhu chake) iwe wawana manotsi makuru uye tsananguro dzenziyo mumazwi ake, kunyanya Jazz o neapo. Uye ndezvekuti munyori uyu ari fan guru remimhanzi, kunyanya idzi mbiri dzemhando.
Zvakanaka, isu tinogona kutotaura nechivimbo chakazara kuti isu takafanana kana zvakafanana muunganidzwa wemimhanzi Patinogona Haruki Murakami anoteerera nekumukurudzira kune mazhinji (kana asiri ese) emabhuku aakanyora kusvika zvino.
La play play tinogona kuiteerera muchirongwa chemimhanzi Spotify uye yakasikwa neimwe Masamaro Fujiki, nyanzvi huru yezvose zviri zviviri zvinyorwa uye zvinonakidza zvemimhanzi zvemunyori wechiJapan. Ingo isa zita rako muinjini yekutsvaga uye uwane rondedzero izere yezvino 3.158 nziyo. Mune zvese vari anopfuura maawa makumi maviri nemaviri emimhanzi yakanakaKana iwe uri munyori, unoda mimhanzi yechinyakare, jazi, bhuruu uye vamwe pop nevanhu, pamwe vanogona kukubatsira zvakanyanya saMurakami mune chako chinyorwa chinyorwa. Ndiani anoziva? Vanoti isu tinofanira kutevedzera zvakanakisa kuita zvinowedzera zvakanaka zvinhu ... Ko kana tikatanga neizvi?
Studio nemavinyls panonyora H. Murakami (Mufananidzo nemunyori iyeye)
Handizive, zvakadaro, kana zvichizondibatsira neunyanzvi hwangu hwekugadzira kana kwete… Handina kuwana nguva yekuziva. Chandinoziva ndechekuti ini ndiri kuteerera kune urwu runyorwa apo ini ndinonyora iyi mitsara uye zvakanaka chaizvo kutarisisa nekunyora. Uye zviri izvo kuti iye munyori akazvitaura mubhuku rake "Makore ekushama kweshoko risina ruvara": «Hupenyu hwedu hwakafanana nechikamu chakaomarara chemimhanzi. Kuzadzwa nemhando dzese dzekunyorwa kwekunyepedzera, gumi nematanhatu uye makumi matatu masekondi manotsi, uye zvimwe zviratidzo zvinoshamisa "Zvinenge zvisingaite kuzvidudzira nemazvo, uye kunyangwe zvikagona, zvobva zvashandurwa kuita manzwi akarurama, hapana vimbiso yekuti vanhu vanonzwisisa kana kukoshesa zvadzinoreva."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Iko kuunganidzwa kwemimhanzi kunokurudzira munyori H. Murakami kunozivikanwa
5 akanaka mabhenefiti ekunyora